Realme yave ichishusha kusvika kwayo kusvika, ichikura zvese zviri zviviri uye gare gare. Asingasviki makore maviri apfuura, yakanga iri mhando yekuvhiringidza kupinda-chikamu chefoni kune mutengo-kuziva Southeast Asians. Asi kubvira ipapo, yakakura kuita seyaka poster-chikoro chemukomana we premium-giredhi kukosha kwemafoni emari aripo mumisika mikuru yepasirese. Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti, kuvhiya uku kunokatyamadza kwakatyisidzirawo dzimwe mhando, seXiaomi, dzakasimuka pachirongwa chekukwanisika. Realme akagovera mamwe mafoni emhando yepamusoro muna 2019 uye akaisa zvimisikidzo zvakaita sepop-up selfie kamera, Super AMOLED inoratidzira ine-inoratidza zvigunwe zvigunwe, 64MP yekumusoro kamera setups, uye zvakanyanya kukosha, isingaenzaniswi yekuchaja kumhanya mhanya pamakasiyana emitengo mitengo. Kusvikira Realme X2 Pro, Realme yepakati-huwandu uye yavo yekuchengetedza-kune-premium mutserendende yaive chete kune Snapdragon 710 / 712 uye izvi zvakaita kuti zvionekwe zvisina kusimba kana zvichienzaniswa nemakwikwi. Kugadzirisa izvi pakupedzisira, Realme akagamuchira a Snapdragon 730G powered mudziyo mumhuri. Iyo foni nyowani yakadaidzwa Realme x2 uye nepo zvingaite sekunge hama yepedyo kuX2 Pro, inogovera humwe hunhu hwakawanda neiyo Realme XT.
Realme X2 XDA Foramu
Realme akatanga kuseka X2 pa Realme XT kuvhura kuIndia uye vhiki gare gare, yakatangwa muChina. Mumwedzi unotevera waGumiguru, Realme yakatanga Realme X2 pamwe neX2 Pro muChina neEurope. The Realme X2 yakasvika muIndia pakupera kwaZvita, sezvakavimbiswa nekambani, kunyangwe iyo Realme X2 Pro yakanga yatotanga mwedzi pamberi. Kunyangwe iyo Realme X2 ingave imwe yemafoni ekupedzisira kuvhura muIndia muna 2019, yaive iri yeimwe inozivikanwa.
Sezvandakataura, iyo Realme X2 inonzwa zvakanyanya kusangana neiyo Realme XT pane iyo Realme X2 Pro. Muchokwadi, iyo Realme X2 inoshandisa iyo yega zita, dhizaini 64MP Quad-kamera setup, uye yakafanana RAM-yekuchengetedza magadzirirwo. Izvo chete mutsauko ndeye chipset nyowani, 50% inokurumidza kuchaja, uye yakavandudzwa selfie kamera. Asi zvinonakidza kuti, mitengo yemafoni ese ari maviri inosiyana ne1,000 chete (~ $ 15) muIndia. Chinhu chinomanikidza pakati peshanduko dzese muHenme X2 ndiyo chipset nyowani uye inounza mabudiriro maererano nekushandiswa kwese kwese mazuva ese pamwe nekutamba. Neyepazvino chipset uye 64MP kamera, Realme ari kushambadzira iyo smartphone se "64MP Performance Xpert."
Ndakanga ndine mukana wekuyedza iyo 8GB RAM kusiana kweRedme X2, iyo yaikweretwa kwatiri naRealme India. Mune ino kuongorora, ini ndinonyanya kutarisa nezvekukanganiswa kweiyo itsva Snapdragon 730G chipset pamafoni mashandiro, ayo akaongororwa kwenguva yakareba kwemavhiki maviri. Uyezve, chidimbu zvakare chinorema icho Realme's X2 inokurumidza 30W kubhadharisa.
Kubata kukuru uye kupisa kukuru kupisa
64MP kamera pane bhajeti
30W kurumidza kuripira kuzadza bhatiri mune makumi manomwe emaminetsi
Kukosha kukuru kwemari
Anorasikirwa nerutsigiro rweLTE rwevatakuri vakuru veUS
Plastiki chimiro chinogadzira kuvandudzwa
Yakatemerwa yechitatu-bato budiriro
Tenga muIndia: 4GB / 64GB (₹ 16,999) || 6GB / 128GB (₹ 18,999) || 8GB / 128GB (₹ 19,999)
Tenga muEurope (chete 8GB / 128GB): Italia (299 €) || Spain (279 €) || Furanzi (299 €) || Jerimani (299 €)
Realme X2 Rondedzero
yakawedzera Adreno 618 GPU
chengetedzo 64GB / 128GB UFS 2.1
Akazvitsaurira microSD slot
bhatiri 4000mAh, 20W VOOC 3.0 kukurumidza kuchaja
Fingerprint Sensor Mune-kuratidza zvigunwe zvemunwe
64MP Samsung ISOCELL GW1 yekutanga sensor, f / 1.7
8MP 119 ° yakakura-angle sensor, f / 2.25
2MP yakadzika sensor, f / 2.4
4K vhidhiyo kurekodha pa 30fps
Yakazara HD vhidhiyo kurekodha @ 30fps
Android Version ColorOS 6.1 zvichibva pa Android 9 Pie
mavara Pearl Muchena, Pearl Bhuruu, Pearl Green
Nei Snapdragon 730G?
Powered ne Snapdragon 730G, iyo Realme X2 inotora paRedmi K20 (Mi 9T), iyo yakatangwa padivi pamwe chete nePro hama yake mwedzi mishanu pamberi peiyo Realme X2. Pane mimwe misiyano inooneka pakati peRedme X2 neRedmi K20 (Mi 9T) uye kutengeserana-kunopera neimwe yeimwe michina. Kunze kwekunge iri mudziyo mutsva, iyo Realme X2 Pro inodarika Redmi K20 (Mi 9T) ichishandisa GPU ine simba zvakanyanya, yepamusoro kamera resolution, zvirinani kuratidza mhando, kukurumidza kuchaja, dhizaini yakagadzirwa, uye yakawedzera 8GB RAM sarudzo, iyo isingawanikwe yeRedmi. Iyo Redmi, kune rumwe rutivi, inouya isina unhindered notchless kuratidzira uye yatove neApple 10 pamwe neUX yakakura mune fomu MIUI 11.
Sezvo pasina mafoni mazhinji-anotungamirwa - kana, vatevedzeri vekumiririra - muchikamu- zviuru zvina makumi maviri nezvishanu (mazana matatu emadhora), Realme ine mukana wakanaka wekukwira kurwisa Xiaomi's Redmi, kunyanya sezvo Realme X25,000 isingadhuri. Parizvino, Qualcomm's Snapdragon 350G iri pakati pezvakanakisa-zvinoita chipsets mune yepamusoro tier yepakati-renji chikamu. Iyo tech tech yenharaunda iri kungotanga kudziya kusvika kune iyo pfungwa ye Snapdragon 765G, inova yekutanga yepakati-padanho 5G chipset uye mutsivi weiyo Snapdragon 730G. Parizvino, tangoona zvishandiso zviviri - izvo Redmi K30 5G uye Oppo Reno3 Pro - inofambiswa neiyo Snapdragon 765G asi izvozvi zviripamusoro kuChina.
Iyo Snapdragon 730G uye Snapdragon 730, iyo inopa masimba iyo Redmi K20 (Mi 9T), akafanirwa akafanana uye musiyano chete ndeye iyo yakadarika Adreno 618 GPU pane yekutanga. Nekuda kwehuremu hwayo hweGPU, iyo Snapdragon 730G inofanirwa kunge iine kusvika ku15% zviri nani kuita graphic performance zvichienzaniswa neyakajairwa, sans-G musiyano. Nezve CPU, ese ari maviri anoshandisa octa-musimboti dhizaini neArm's yakakura.LITTLE architini, vachiita shandiro yekuita maviri uye matanhatu matanhatu anoshanda-cores.
Iyo Snapdragon 730G nharembozha iri pachena nhau dzakanaka kune avo vane nzara yemitambo kunze kwekunyepedzera kutora zvimwe neiyo 64MP kamera. Iyi seti inotarisirwa kupfuura iyo Snapdragon 710/712 pane yakapfuura Realme zvishandiso - kusanganisira iyo Realme 3 Pro uye Realme X - pamwe ne Snapdragon 675, yaiita sekupa nani zvikwangwani zvemabhenji panguva yedu kuongororwa kweRedmi Note 7 Pro.
Realme yakagadziriswa muIndia yekushandisa imwe yekare Snapdragon 710 paRorme 3 Pro; saka, iyo Snapdragon 730G inofanirwa kushongedza izvi zvinotarisirwa uye zvakare kufadza Realme mafeki akamirira a zvechokwadi mutambi.
Maitiro echurn ezvebhenji mhedzisiro anotibatsira kuti tiwane mamwe maitiro pamusoro pezvekuita pamwe nekuvandudzwa kwerunhare urwu kana tichienzanisa nevese vepakati-varirs vakatanga neRealme gore rino.
Kuita: Realme X2 inokwikwidza Redmi K20 uye Cherechedza 8 Pro
Iyo chiito chekusvetuka kubva paSnapdragon 712 paRedme XT kuenda paSapapdragon 730G pane iyo Realme X2 yakazara ubiquitous. Iyo Snapdragon 712 inoratidzira octa-musingi dhizaini rine maviri Kryo 360 Goridhe cores yakaiswa pa2.3GHz uye mitanhatu yeKoryo 360 Siliva cores yakaiswa pa1.7GHz. Iyo Snapdragon 730G yakarongedzwa maviri akanyanya-kushanda Kryo 470 Goridhe cores yakavharwa pa2.20GHz uye matanhatu-akanyanya kubata Kryo 470 sirivha cores ine frequency ye1.8GHz.
Kuzeya kukwidziridzwa uku pamusoro pechinyakare chipset, ndiri kushandisa yakajairika yekugadzira yekumaka mabhenji. Semuenzaniso, ini ndiri kushandisa mabhenji zvikwangwani kubva kwedu ongororo yeiyo Realme 5 Pro, inoshandisa chaizvo zvakafanana zvemukati hardware seRealme XT.
Iyo yekufananidza zvakare tambo muXiaomi's Redmi Note 8 Pro, iyo mitambo a MediaTek Helio G90T chipset uye akaridzwa se "yepakati-rakasiyana mutambo mhare”Na Arol mukuwongorora kwake foni. Iyo Helio G90T uye Snapdragon 730G vane yakaenzana yakafanana microarchitecture. Dzese dziri mbiri chipsets zvine octa-core aratidziro ane maviri akanyanya-kushanda cores yakavakirwa paArm's Cortex A76 dhizaini uye matanhatu akanyanya kushanda Cortex A55 cores asi iyo CPU masango ane akasiyana iwawa kumhanya. Kusiyana nekwakambodudzwa wachi yekumhanyisa kwekuita uye kushanda kwakanaka paSnapdragon 730G, iyo Mediatek Helio G90T's cores cores at wachied at 2.05GHz apa iyo cores-inoshanda macores ine wachi yekumhanya kwe2.0GHGHz. Chimwe chinhu chekucherechedza ndechekuti Snapdragon 730G ine chimiro che8nm, iyo Helio G90T yakavakwa pane 12nm maitiro. Izvi zvinoratidza kuti, mupfungwa, iyo Snapdragon 730G inofanirwa kunge iri simba-rakawanda. Panguva imwecheteyo, iyo 800MHz Mali-G76 MP4 GPU paHelio G90T inogona kupfuura Snapdragon 730G's Adreno 618 - yakavharwa pa 575MHz - zviri nyore.
Qualcomm Snapdragon 710 / 712
Qualcomm Snapdragon 730 / 730G
10 nm maitiro
2 x Kryo 360 Goridhe yakavakirwa paArm Cortex-A75 @ 2.2GHz (2.3GHz pa Snapdragon 712)
6 x Kryo 360 sirivhi yakavakirwa paArm Cortex-A55 @ 1.7GHz
2 x Kryo 460 Goridhe yakavakirwa paArm Cortex-A76 @ 2.2 GHz
6 x Kryo 460 sirivhi yakavakirwa paArm Cortex-A55 @ 1.8GHz
2 x Ruoko Cortex-A76 @ 2.05 GHz
Snapdragon 710: Adreno 616 @ 500MHz
Snapdragon 712: Adreno 616 @ 550MHz
Snapdragon 730: Adreno 618 @ 500MHz
Snapdragon 730G: Adreno 618 @ 575MHz
Mali G76 MP4 @ 800MHz
Mumhanyi ari pachena mumakwikwi aya ndiRedmi K20 (Mi 9T) uye neinouya anowedzera ane simba - Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro), iyo parizvino inodhura zvakanyanya Snapdragon 855 smartphone inowanikwa kunze kweChina.
Ndiri kutanga kuenzanisa nekutora Geekbench uwandu hwe Realme X2 muaccount uye uchifananidza iwo nemamwe madivayiri. Kupesana ne Realme 5 Pro, iyo Realme X2 inoratidza yakakwakuka 70% kusvetuka zvichienderana neyakaenzana-musimboti eCPU scores apo ichiratidza kuwedzera kwe20% muhuwandu hwepakati-scores kuGeekbench 4. Iyo Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) fares yakakwira zvakanyanya nekutenda kwakawanda kweiyo vasere Kryo 470 cores mu Snapdragon 855. Kubva Geekbench 5 yakavambwa mushure mekunge tamboongorora iyo Realme 5 Pro, ini ndinongova nemazera akura emuchina.
Kune mumwe kuenzanisa kweiyo Realme X2's CPU performance neRedmi Note 8 Pro uye iyo Redmi K20 (Mi 9T), ini ndinovimba Geekbench 5. Iyo imwe-yepakati chiratidzo cheiyo Realme X2 inorara mune imwechete ballpark seRedmi K20 ( Mi 9T) sezvo vese vachigovana zvakafanana CPU. Mukupesana, Redmi Cherekedza 8 Pro's Helio G90T inosara kumashure nekaravhani kadiki keasingasviki 10%. Zvichakadaro, maererano neyakakura-yakakosha CPU maverengero ezvekushandisa kuchangobva kutaurwa, iyo Realme X2 inotungamira iyo Redmi Note 8 Pro pamwe neRedmi K20 (Mi 9T) nomugodhi we7.5% uye 9.5%, zvichiteerana.
Kufambira mberi AnTuTu, imwe yemabhenji anozivikanwa zvikuru ayo anotarisa mashandiro anoita chero mudziyo zvakazara. Iyo miedzo inoyesa kuita kwemushandisi mumwe nemumwe - nekuyera CPU, GPU, RAM, uye mushandisi chiitiko zvakasiyana, wobva wawedzera iwo masapureti kune imwe chete yekupedzisira chikoro. Sezvatinoona kubva pamifananidzo yekufananidza, iyo Realme X2 inotungamira iyo Redmi Note 8 Pro uye iyo Redmi K20 (Mi 9T) maererano neCPU performance yakavharwa naAnTuTu. Asi kana zvasvika kune GPU mamakisi, iyo Redmi Note 8 Pro inotungamira nekuda kweiyo nguva huru yevhavha yekusiyanisa kweMali-G76 GPU paHelio G90T SoC. Iyo Redmi K20 (Mi 9T), kune rimwe divi, inoramba iri kumashure kweRedme X2 nekuda kweiyo yepazasi wachi kumhanya kweGPU yayo. Zvinotaridzika, iyo Realme X2 inosara kumashure kwedzimwe dzese mafoni muUX bvunzo, zvichiratidza kuti MIUI inogona kuve yakagadziridzwa zviri nani kana ichienzaniswa neColorOS yekuita sekukoromora uye kuyerera kuburikidza neiyo interface.
Iyo Realme X2 ichiri kusara shure kweRedmi Cherechedzo 8 Pro mune zvine chekuita nekuyeuka miedzo. Kupesana nemaitiro aya, zvisinei, iyo Realme X2 inoita zvirinani kupfuura Redmi K20 (Mi 9T) uye Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) ichimhanya MIUI 10. Chikamu chakaderera zvisina kujairika uye chinogona kunge chiri nekuda kwekutadza kwehunyanzvi kana kushomeka kwakakodzera. Tsigiro yeiyo chaiyo bhenji bvunzo. Neimwe nzira, inogona zvakare kuve nekuti iyo Realme X2 neRedmi Note 8 Pro yakaedzwa vachishandisa AnTuTu v8 nepo zvishandiso zvakasara zvakaedzwa neshanduro yekare yeapp. Kugonesa iyi fungidziro, AnTuTu v8 paRedmi K20 Pro (Mi 9T Pro) ichimhanya MIUI 11 mamaki yakaratidza kukosha kwakanyanya. Kupfuura, zvakadaro, iyo Realme X2 inotungamira iyo Redmi K20 (Mi 9T) asi inosara kumashure kweRedmi Note 8 Pro.
AnTuTu Benchmark (Mahara, Google Play) →
Wangu unotevera bvunzo PCMark'' Yekushanda 2.0 iyo inofanidza chaiyo-yehupenyu yekushandisa mamiriro ekuyedza kugona kweiyo smartphone yekugadzira-centric mabasa akadai sewebhu kubhurawuza, zvinyorwa zvemavara, foto uye vhidhiyo kurongedza, nekudyidzana nedata uye magirafu pamapaspar. Pano, iyo Realme X2 iri kunyatsoita zviri nani kupfuura iyo Realme 5 Pro uye Redmi K20 (Mi 9T) asi inorohwa neisina kujairika akakwira alama eRedmi Note 8 Pro, yakanyanya kukwirira kupfuura iyo Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro). Muye mucherechedzo 8 Pro yekuongororwa, Arol akasimbisa kuti mhedzisiro yakafanana yakauya kunyangwe akawanda ma iterations. Mhedzisiro iyi pamwe neiyo UX mamaki kubva kuAnTuTu inoratidza kuti Redmi Note 8 Pro inotarisirwa kupa chiitiko chakajeka kunyangwe Realme X2 ichienda nani zvirinani maererano nekugona kwayo kugadzirisa.
PCMark yeApple Benchmark (Mahara, Google Play) →
Kuenderera mberi kune 3DMark, iyo inoedza iyo graphic inopa kugona kweema smartphones, isu tinoona Realme X2 ichikwira pamusoro pe Realme 5 Pro uye iyo Redmi Note 8 Pro mune bvunzo dzinoshandisa zvese zviri zviviri - OpenGL ES 3.1 uye Vulkan - APIs. Zvinofadza, izvi zvinopesana nemaitiro atinoona muAnTuTu's GPU bvunzo. Uyezve, nepo Redmi K20 (Mi 9T) ichidzika pazasi Realme X2 Pro mu OpenGL bvunzo, kukwikwidza kunodzokorora neVulkan API scores. Iyo Redmi K20 (Mi 9T) inonyanyisa kukwira pane iyo 3DMark Vulkan bvunzo kunyangwe ine GPU isina kusimba, kunyange musiyano uchingori 2%.
3DMark - Iyo General Benchmark (Mahara, Google Play) →
Kuunza iyo hondo kune yekumhanyisa kumhanya kwekuchengetedza kweidzi zvishandiso, maitiro acho akafanana kana mashoma akafanana kana akaongororwa kuburikidza AndroBench. Iyo UFS 2.1 NAND yekuchengetedza, inokurumidza kukurumidza kupfuura eMMC storages, yakajairika kune ese eaya madivha sezvinotarisirwa, tinoona mienzaniso yakafanana. Kunyangwe iyo Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) ine tekinoroji imwechete yekuchengetedza, ine yakakwirira yekumhanyisa mhanyisa, kunyanya pakubata kwe sequel IO. Izvi zvinodaro nekuti iyo mbiri-nzira yekuendesa kuUFS 2.1 masisitimu ekuchengetera haina kutsigirwa nemachipsets pane mamwe madivayiri. Uyezve, kune dip inooneka mune yekusagadzika kunyora kumhanya kweese maRextme zvishandiso asi kwete maRedmi mafoni mukuenzanisa. Icho chikonzero chiri shure kweichi chisina kujeka, asi chinogona kunge chiri nekuda kwekugadzirisa zviri nani kwedatha indices muMIUI zvichienzaniswa neColorOS.
Androbench (Kuchengetera Benchmark) (Mahara, Google Play) →
Smartphones mazuva ano anouya nekudzivirira kwekudziya, kazhinji muchimiro chekuratidzira algorithms ePCU uye GPU. Naizvozvo, kuita kwacho kunorambidzwa kudzivirira chero maitiro ekunyanyisa nekuda uye mukati meyakareba mutambo wemitambo kana kushanda-kwakanyanya kushandiswa kana uchiripira. Kuti ndiedze kana paine chero mafuta anodonhedza mvura paReime X2, ndakashandisa app inonzi CPU Kutambanudza Muedzo uye magirafu pazasi anoratidza mhinduro.
Iyo kuruboshwe kuruboshwe nemhedzisiro isina Realme yakatsaurwa yemitambo nzira inonzi Game Space, iyo iri pakati inoratidza mhinduro dzinobuditswa kana app ikamhanyisa uchishandisa Game Space, nepo kurudyi kunoratidza mhinduro apo foni yakaiswa mukuchaja. . Muyedzo inoitwa pasina Game Space, iyo CPU inoshandiswa inokandwa panosvika 95% yeiyo yepamusoro petsetse. Paunenge uchishandisa Game Space, zvisinei, hapana chinonamira chakaonekwa. Zvimwe kunze kweizvozvo, pane chidiki (~ 1%) kuwedzera kwepamusoro uye avhareji mafrimu pane bvunzo yekutenderera. Chekupedzisira, uchiripa, kupisa kunozoita kuti basa racho riumburwe kusvika 93%, izvo zvichiri zvinogamuchirika. Muhupenyu chaihwo, foni haina kupisa zvakanyanya ichitamba uye ichi chiratidzo chakanaka kune vashandisi vanofarira kwenguva refu mitambo yekutamba. Iko kusakoshesa kuisa ruoko panguva yekuchaja zvakare kunoratidza kuti iwe unogona kuenderera mberi kutamba pamutambo uchichengetwa nefoni yakadzvanywa mukati yekuchaja.
CPU Throttling Muedzo (Mahara, Google Play) →
Izvo zvigadzirwa zvekugadzira mabhenji anotipa zano rakaringana nezve maitiro akajairika atinogona kutarisira kubva kuRorme X2 pamwe nekuenzanisa kwakanaka nevamwe vakwikwidzi. Kuyera iyo Realme X2 chaiyo yehupenyu-hwekuita, ini ndakatamba mimwe mitambo inozivikanwa uye inodairira.
Heano rundown yekuitwa kwemitambo iyi kuyerwa ne GameBench ine zvikamu zveanoda kusvika maminetsi makumi matatu neimwe. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyi mitambo yakasimudzirwa neinbuilt maitiro ekutamba anonzi Game Space.
Kutanga Asphalt 9, iyo Realme X2 inoshandura-isina-gameplay. Chiyero chemufambo, kunyangwe chichienderana, chakabatwa pa30fps pafoni uye kuita kwacho kuchiri kungoramba kwakafanana, zvisinei kuti unosarudza High Performance kana High Graphics mumutambo weZvino Zviridzwa. Sezvinotarisirwa, chiyero chemufambo chinodonha zvishoma kana paine kamwe kamwe shanduko yemamiriro epasi kana mota ikatsemuka asi iwo muhombe furemu ratidziro madonhwe anoitika pamitengo yekutakura. Pakazara, iyo Realme X2 inomira sefoni yakanaka neasifurati yeAsphalt 9 yemitambo.
Asphalt 9: Ngano - 2019's Zviitiko Zvemotokari Mutambo (Mahara, + Google Play) →
ne PUBG Mobile, iyo Realme X2 inotsigira "Ultra" chimiro cheyero sarudzo seyakanyanya kurongeka. Izvi zvinoreva kuti inongofambisa huwandu hwe40fps mukufunga. MuPUBG Mobile, iyo mutambo wemutambo uyu wakasarudzika uye hapana chakafanira chero kuderera mwero mwero kudonha. Iko shanduko mumagadzirirwo enzvimbo inoita kuti zvidiki zvidimbu zviyero zvidzikame asi neimwe nzira, mutambo wemitambo unoramba uchinyorova uye uchinakidza.
Iyo yakanyanyisa Grafiki kureva 60fps mutambo wemitambo sarudzo inogona kuvhurwa neGFX zvishandiso senge PUB Gfx Turu app asi cherekedza vamwe vashandisi vanofunga kuti kuita izvi kunogona kukonzera kurambidzwa kwechinguva. Kuti ndinyatso kujekesa, ini handina kugamuchira yambiro kubva kuTencent ikozvino saka ini ndinoramba ndichienderera-nekudzokorora chimiro chemuti kusvika ndabatwa - asi hazvireve kuti iwe unofanirwawo, kunyanya kana uri wepamusoro mutambo . Kumhanya PUBG Mobile pane yakakwira furemu mwero haina kukonzera chero cutbacks mukuita, kunyangwe CPU kushandiswa inowedzera zvishoma. Kunyangwe pane yakanyanya mifananidzo, iyo furemu chiyero inongofamba-famba ichitenderedza iyo 60fps chiratidzo, zvichiratidza kuti iyo Reame X2 inogona kwazvo kutamba PUBG Mobile panzvimbo yakakwirira chero panowanikwa rutsigiro parunhare.
PUBG MOBILE (Mahara, + Google Play) →
Kudanwa kweDuty Mobile
Kudanwa Kwebasa Nhare natively inotsigira Max furemu ratidziro kumisa iyo inobvumira kutamba pa60fps. Nekudaro, iyo mimhanzi uye kutakura zviyero zvinoremerwa kunze ku30fps, zvichitungamira kune yakaderera FPS kugadzikana sekufananidzwa nePUBG Mobile. Paunenge uchitamba, chiyero chemufambo chinogara chichienderera uye chinotenderedza makiromita makumi matanhatu uye iwo chete furemu remadonhwe anoonekwa kana uchinge wapfurwa kana uri kuputika.
Call of Duty®: Nhare (Mahara, + Google Play) →
Shadowgun Ngano mutambo mumwe chete uyo unoratidzika kusimbisa iyo Realme X2. Nepo chiyero chemufambo chinowanzogara chiri pedyo ne60fps paHigidhi mifananidzo, inodonha apo neapo kusvika pakadzika kunge makumi mana neapfupi uchiri mukati memutambo nekuchinja mumashure memba uye kana vatorwa varikukupfura. Chiyero chemufuratidzowo chinodonhedza paunofamba-famba mukati mekutandarira usiri kutamba chero kuda. Nekudaro, apo girafu remifananidzo iri kuiswa kuUpfuura High, iyo jitter uye furemu inodonha inodzivirira gameplay inonyanya kuoneka uye yakasimba. Kunze kwejank, iyo furemu inodonha uye zvisingawanzo zviitiko zvekushungurudza zvinoita kuti iyo gameplay isasvike ku Ultra High zvigadziriso.
SHADOWGUN LEGENDS - FPS PvP uye Coop Shooting Game (Yemahara +, Google Play) →
Iyo Realme X2 inoratidza seyakasarudzika ine simba uye inoratidza-yakapfuma chishandiso chemitambo uye mabasa akanyanya. Haisi chete ine zviyero zvakakwana zvemitambo yazvino uno, asi zvakare zvinogona kutora mabasa epamba sekurongedza mharidzo yemasiraidhi uye kutarisa girafu pane kuenda. Pamusoro peizvozvo, Google ARCore rutsigiro runoita kuti vashandisi vabatane nenyika yakavapoterera mukutamba nezviridzwa zvakaita Chete Rwonzi.
Bhatiri & 30W VOOC 4.0 kuchaja
Iyo Realme X2 inotema bhata ye4000mAh, yakafanana neiyo Realme X2 Pro uye huwandu hwezvimwe zvishandiso zveRedme zvinosanganisira Realme 5 Pro uye Realme XT. Saizi yakakoswa bhatiri pamwe nekushambadzira kwebhetri muColorOS 6.1 nyore inobvumira hupenyu hwebhatiri iyo inogara anopfuura maawa makumi maviri nemasere uye pasina simba inopa screen-on-nguva ye24 maawa pane imwe neimwe. Mukumira-ne, chikamu chebhatiri parunhare - semamwe madhiragi eAlmeme- chinofamba chisingafambe kunyange kana foni ichiramba isina kubatwa kwemaawa pakupera. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe bhatiri riri pazasi pe6% husiku, unogona kurara husiku usingatyi nezvefoni iri kubuda nebattery husiku.
Kana, zvakadaro, iwe ungada kugona kurara zvine rugare pamwe nekuona kuti foni ine bhatiri rakaringana, iyo VOOC 4.0 yekuchaja tekinoroji, iyo Realme inokwereta kubva kune mubereki wayo OPPO, inobvumira bhatiri re4,000mAh pa Realme X2 pane maminitsi makumi manomwe. Nepo izvi zvingave zvisingashamise se 50W SuperVOOC pane iyo Realme X2 Pro, iyo inobhadharira iyo foni zvizere mumaminetsi makumi matatu, OPPO's Warp Chja zvakafanana zvinonakidza, kunyanya sezvo zvakadai sechinhu hachina kutongoonekwa pamaziratidziro kubva kune zvimwe zvigadzirwa, rega varegedze vari wepakati senge Realme X2.
Foni zvakare inotsigira kubhadharisa ne USB-PD yakatsigirwa kubhadharisa zvidhinha pamwe neOPPO's kana Realme's VOOC 3.0 20W charger, inotora inenge maminitsi 85 kuzadza bhatiri. Iwe unogona zvakare kushandisa OnePlus 'Dash uye Warp charger kuti uite zvakafanana zvakafanana nekukurumidza kumhanyisa.
Iyo Realme X2 ine dhizaini yakafanana neiyo Realme XT uye iyo chete inozorodza zvishoma ndiyo ruvara rutsva rwePearl Green. Zvekare zvakare, iyo yekumashure pani inogadzirwa negirazi apo iyo yakakomberedza yakagadzirwa nepurasitiki, iyo inodzivirira kubva pakupisa isingagone kupisa mushure mezvikamu zvakakura zvemitambo. Iyo ivy green green back panotaridzika zvakanaka uye inofanirwa kufadza vangangove vashandisi kana vatengi kubva kumazera ese ezera. Iyi mumvuri wegirini inogona kuonekwawo muColorOS 'mutambo wemitambo application, saka kusangana kwakabatanidzwa nemitambo kuri kubhururuka.
Iyo chaiyo Realme X2 ruvara rutsva rwegirini pamwe nevekare ebhuruu uye chena mavara anozivikanwa kune X2 uye XT
Kusiyana nezvimwe zvishandiso, iyo Realme X2's chimiro inowana kutarisisa kwakawanda kubva kune yekugadzira kambani timu. Iyo yakapoteredzwa fomu iri pane blandly curved, panzvimbo yakatemwa zvakatsiga uye yakarongedzwa furemu pane mamwe maRealme zvishandiso. Mushure mekushandisa nekudzokorora akawanda Realme yepakati-pakati pe2019, kushayikwa kweruzivo kunondinyadzisa chaizvo. Iwo akadaro chamfers kwete chete wedzera hunhu kuchimiro asi zvakare ita kuti ubate iyo smartphone mumamiriro ekunze, neapo uchitamba kana neimwe nzira, yakanaka yakagadzikana.
Kunze kwekushomeka ergonomics, kuiswa kwea mono mutauri zvakare hakugutsi zvikuru sezvo paine mukana wakanaka uchave wakakwenenzverwa nechanza chako uku uchitamba. Uku kutengeserana-kure kunogona kunge kuri mukutendera kubvumidza kupinda nyore kweiyo headphone jack, kunyanya kana izvo zvauri kushandisa zviine plug yakatwasuka pachinzvimbo chakakona kurira. Zviri pachena kuti hapana zvakawanda zvekunetseka nazvo kana iwe uri kushandisa musoro unoshandisa Bluetooth kana USB-C.
Chamfered mifananidzo inopa zvirinani kubatirira paRextme 3 Pro, Realme X, Realme 5 Pro, uye Realme X2 Pro
Pakazara, kusarudzwa kwepurasitiki kunogona kuve kwakangwara sezvo masimbi njanji dzinotamisa kupisa perceptibly - Ini ndakaona simbi ye Realme X2 Pro's simbi ichipisa, semuenzaniso - asi dhizaini rakatenderedzwa rakashaya chinyakare Realme flavour. Kana ndisati ndatombo simbisa zvakakwana, foni inotariswa kune vashandisi vanotarisira kuita kwakashata (kwete kungoita zvemitambo) uye iyo Snapdragon 730G chipset inofanira kupedza iyo nyota.
Yakatsigira LTE mabhendi
China / India / Europe
B41 (2535 - 2655MHz)
Realme inoshanda pachezvayo seyakagadzirirwa sarudzo uye inoda kutsigira zvido zvevagadziri vanoshanda vega kana sechikamu munharaunda yeXDA. Sezvazvino, kambani yave yakaburitsa kernel masosi eiyo Realme X2 asi ichizosunungura bhutsu rekutanga kuvhura maturusi kunze kweChina. Iyo Chinese chinodhindwa chaicho cha Realme's "In-Depth Test" app, iyo inoshandiswa kunyoresa chikumbiro chekuvhura bootloader, haishande kuIndia unit yandinayo.
Iyo ramangwana rekusimudzira kwe Realme X2 inoenderana nebootloader yekuvhura chishandiso uye nepo runhare, pacharwo, rwakanakira chero munhu anotarisa kutamba kupfuura kungozviitira, pinza mimwe mifananidzo mikuru, kana ushandise inoratidza uye yakajeka kuratidzira kwevaraidzo yavo, mudziyo uchatadza kunyengedza chero munhu anoda kuisa tsika firmware pairi.
Realme X2: Iyo itsva yakanakira yekuita kwepakati-mhando
Iyo Realme X2 haidi kukumbira kutariswa kwako nekuti kukosha kwayo kwemari yatove yekuba zvakadaro. Iyo Realme X2 ndiyo inodhura zvakanyanya Snapdragon 730G smartphone inowanikwa kunze kwenyika, uye handiyo yega kunaka kwayo. Yayo Super AMOLED kuratidzwa pamwe nekunyengera girazi kumashure dhizaini inoita iyo inotyisa smartphone mukati wepakati. Nezvinhu zvese zvakasunganidzwa pamwe chete, iyo Realme X2 inopenya seimwe yepamusoro mid-rangers iyo iwe yaunofanira kuisa mari mairi, uchiramba uchifunga mamiriro ayo echitatu-bato firmware uye tsika yekuvandudza rutsigiro parizvino ine mashoma. Kana iwe uri muUS, zvisinei, iwe unganzwika kushomeka nekuda kwekushayikwa kwakaringana kweRTE mabhendi, saka ita shuwa kuti unotarisa kune avo vasati vatenga iyo smartphone.
Dambudziko rimwe chete neReeme X2 nderekuti rinoita iro Realme X uye iro Realme XT inzwe sekunge smartphones muchizvarwa chekare che X series smartphones nekutsiva iwo isingasviki mwedzi mitanhatu. Nenzira, Realmeu akanyevera vashandisi avo vaishuva kuita zvirinani uye kwete 6MP kamera kumirira iyo Realme X64. Asi ₹ chiuru chemitengo chekusvetuka chichaita kuti ivo vekutanga vatore mwoyo vanzwe sekunge ivo vakabhadhara mutengo unorema kwefoni. Nenhepfenyuro dzinoverengeka mukutevera nekukurumidza, kambani yakadzikisawo hupenyu hwemasherufu evanodaidzwa kuti ma ”smartship smartphones” ayo avakatangisa pakutanga kwa2 uye izvi zvinogona kurova kukosha kwavo mumusika wepamberi pevaridzi.
Kana, zvakadaro, iwe usina kupa mukuyedzwa kwekunge uri pakati pevashandisi vekutanga kunakidzwa ne 64MP kamera - kana kugara kure neRedmi Note 8 Pro nekuda kwekushayikwa kwayo kweiyo Snapdragon chipset, iyo Realme X2 inotaridzika serunhare rwakanaka kwazvo iwe unogona kupinda mukutsinhana nemari yako-yakawomeserwa.
The post Realme X2 Performance & Mitambo Yekuongorora: Iyo Yakanyanya Mid-Ranger ye 2019 yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Infinix Hot 11S mutengo, misiyano yakaburitswa isati yatanga
Maitiro Ekunyatso Misa uye Kumisikidza KDE Plasma paArch Linux